Vekumaruaa Vazhinji Vorarama neZvikwereti Sezzvo Hupfumi hweNyika Hwaenda kuMawere
Vanhu vekumaruva vanonzi vokwereta kuitira kuti vawane mari yekutenda chikafu. - AP-
Sangano re Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee (ZIMVAC) muongororo yaro yakanzi 2016 Rural Livelihoods Assessment Surveys rinoti huwandu hwevanhu vari mumaruwa huri kutambura nezvikwereti nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu hwakwira zvakanyanya kusvika pazvikamu makumi masere kubva muzana.
Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekushaya chikafu. Ongororo iyi inoti vazhinji vari mumaruva vari kutengesa midziyo nezvipfuyo zvavo senzira yekutsvaga raramo.
Nzvimbo dziri kunyanya kutarisana nedambudziko iri dzinosanganisira Matabeleland South ne North, Masvingo, ne Manicaland. Zvikwereti zvakawanda zvinonzi zvange zviri zvekubhadhara mari dzezvikoro nechikafu.
Gurukota rinooona nezvemagariro evanhu Amai Prisca Mupfumira vakaudza bepanhau re Herald kuti vari kushanda nematunhu akasiyana siyana kuti vawedzere huwandu hwevari kuwana chikafu kubva kuhurumende.
Vamwe Amai vekwaChivi Gogo Matizorofa vanoti ichokwadi kuti vakawanda mumaruwa vari kurarama nezvikwereti.
"Ichokwadi zvinhu zvaooma kuno kwaChivi tinotokwereta zvekudya kuzvitoro mwedzi woga woga zvinosvika pa$40 tozopota tichidzosera asi zviri kuramba zvichiwedzera kuoma," Gogo Matizorofa vaudza Studio 7.
Gogo Matizorofa vanoti vane vazukuru gumi nepiri nevana vavo vari pamusha sezvo varikushaya mabasa sezvo hupfumi hwenyika hwuri kuramba uchienda kumawere zvinoreva kuti ivo ndivo vanofanirwa kupa mhuri yese zvekudya.
Vaenderera mberi vachiti kusanaya kwemvura mudunhu iri nekutsva kwakaita zvirimwa ndiko kuri kuwedzera dambudziko rekukwereta mumaruwa.
Hurukuro naGogo Matizirofa